mardi, 23 février 2016 14:04
Fikomiana tany Inanantonana : Hiakatra Fitsarana anio ireo voarohirohy
Hiakatra fampanoavana anio talata 23 febroary ireo olona 7 mianaka nosamborina tany amin’ny Kaominina Inanantonana-Betafo. Vao maraina dia efa tomefy olona nanoloana ny lapan’ny Fitsarana Antsirabe niandry izay niseho, saingy mbola ny tolakandro indray vao ho raisin’ny Fampanoavana ireo voarohirohy, izay marihina fa mpitandrina avy amin’ny FLM ny iray, izay voalaza fa teo am-panomanana ny fampianarana kaofirmasiona tany an-toerana no nosamborina raha ny fijoroana vavolombelona nataon’Atoa Rakotoarivony, nifanila trano taminy. Efa niatrana teo anoloan’ny Fitsarana moa ny Emmo-Reg noho ny habetsaky ny olona avy tany an-toerana manaraka ity raharaha ity, izay fiara 5 be izao no nitondra azy ireo avy any Inanantonana.
mardi, 23 février 2016 10:57
Ho betsaka ny rotsakorana sady hatanjaka, ny 24 sy 25 febroary ho avy izao amin’ny faritra Atsinanana, Mangoro, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'Imania, Vatovavy Fitovinany, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Anjozorobe, Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo, Antananarivo sy Andramasina. Entanina ireo mponina sy ireo tompon’andraikitra mba ho mailo sy hitandrina tsara hialàna amin’ny mety fihotsahan’ny tany.
lundi, 22 février 2016 22:10
Toamasina : Vehivavy zandary iray torana teo ampanaovana “marche canard”
Vehivavy zandary iray no torana tsy nahatsiaro tena teo ampanaovana “marche canard” sy “roulade” tamin’ny lalana mirefy 800m eo, niainga teo amin’ny tetezan’ny hopitaly be hatreo amin’ny tobin’ny zandary misy ny fari-piadidian’ny zandary misahana an'i Toamasina. Maromaro ihany koa ireo zandary nalemilemy taorian’io, vokatry ny hafanana nigaingaina.
dimanche, 21 février 2016 21:59
Dingana faharoa hiomanan'ireo ankizy andraisana ny Sakramentan'ny BATEMY amin'ny sasakalin'ny Paka ho avy izao, miisa 180 eo izy ireo.
samedi, 20 février 2016 22:32
Fivoriambe hiatrehana ny kere any atsimo
Toa ny 4x4 aloha hatreto no feno noho ny fotsimbary nentina.Nandaniam-bola be ny kivorivory.
vendredi, 19 février 2016 18:39
Ambovombe Androy : Latsa-dranomaso ny Minisitra Onitiana Realy
Latsa-dranomaso ny Minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy, Onitiana Realy teo am-panombohana ny fivoriana fitadiavana ny vahaolana ho an'ny any Atsimo, atao ao Ambovombe Androy mandritra ny roa andro manomboka androany. "Miangavy amintsika aho, aza lany andro amin’ny adihevitra amin’ny ‘définition’. Aza mandany andro, na iray segondra aza, amin’ny fanomezan-tsiny ny teo aloha. Mivoaka eto isika rahampitso dia tokony mitondra vahaolana hoe izao no zavatra mivaingana navoakan'ny Malagasy (...) Mangataka amin’ntsika aho. Tena miangavy. Efa mafy loatra ny iainan'ny vahoaka malagasy - fahanginana nandritra ny segondra maro - Andao isika hitady vahaolana !"
Doany Miarinarivo Mahajanga
jeudi, 18 février 2016 21:03
Doany Miarinarivo Mahajanga : Misy miketrika hamarotra
Gaga ireo mpanompo ao amin’ny doany Miarinarivo Mahajanga mandre fa misy mitady hivarotra ny ampahan’ny tany ao amin’ny Doany Tsararano.
jeudi, 18 février 2016 09:18
Ambohimangakely : Haitrano sy fiara
Milelalela midorehitra ny afo amin'izao mandoro trano sy fiara ao Ambohimangakely. Efa an-dalana ny mpamonjy vonjy afo. Ny fokonolona manao izay hafany nefa tsy mahatohitra ny afo.
mercredi, 17 février 2016 21:32
Photo: Sobika Illustration
Habibiana : Zazavavikely maty novelesin’ny raikeliny ny angady
Ankizivavikely iray, 10 taona no maty tsy tra-drano novelesin’ny raikeliny ny angady, tany Antevamena, Kaominina Tsiamisy, Distrikan’i Toliara II. Nifamaly ireo mpivady. Nandositra niala tao an-trano ilay renim-pianakaviana rehefa tsy nahazaka intsony. Navelany irery tao an-trano ilay zaza, zanany tamin’ny olon-kafa. Nentin-katezerana ilay raim-pianakaviana ka ilay zaza no novelesiny tamin’ny angady ka voa teo amin’ny hatony ary maty tsy tra-drano. Lasa nitsoaka ilay rangahy taorian’izay, saingy voasambotry ny Fokonolona. Any am-ponja izy amin’izao.
Faritra ivan'Antananarivo Renivohitra
mardi, 16 février 2016 21:03
Tondradrano ny faritra iva
Vao nirotsaka telo andro fotsiny ny orana dia efa doborano sahady ny faritra iva ka dia voatery mirobo-drano maloto indray ny mponina. Maro sahady ireo zaza no tratran'ny fivalanana, ny areti-koditra sy ny mangidihidy samihafa. Ny lehibe moa dia tsy maintsy mitady ny hanin-kohanina dia voatery miroboka anatin'ny maizina rehefa hariva ny andro. Efa an-taonany izao toe-javatra izao fa tsy misy mpijery fa anaovana fampielezan-kevitra fotsiny ihany.
Page 419 sur 457